Fomba fahandro fototra: dibera tongolo lay - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Saosy5 minitraOlona 200 g750 kaloria
Tongolo dibera dia a dibera misy tsiro izany dia hanome anao lalao maro rehefa manamboatra fomba fahandro tsotsotra sy mahavariana.
Ampiasao izany mba hanomezana fikitika manokana an'ireo toastanao na legioma, hena ary trondro voatoto na voatono.
Ary koa ity fomba fahandro ity tsotra manamboatra, mitazona ary mampiasa. Ka tohizo ity recette fototra ity.
1 Fomba fahandro fototra: dibera tongolo lay
2 Te hahafantatra bebe kokoa momba ny dibera tongolo gasy ve ianao?
Ity dibera misy tsiro ity dia mety indrindra hanomezana manokana ny sakafonao, trondro, legioma na paty.
Fanompoana: 200 h
Persily 15 g (ravina fotsiny, esorina ny taho)
Sira 1 sotro (haben'ny volontsôkôla)
200 g diberan'ny namboarina
Napetrakay tao anaty vera ny ravina persily voasasa sy maina. Ampio ny jirofo vita amin'ny tongolo lay sy ny sira. Torotoro izahay mandritra 10 segondra, hafainganam-pandeha 5. Ampidininay mankany amin'ny lela ny lelany ary averintsika in-3 indray.
Ampio dibera ary afangaro 20 segondra, hafainganam-pandeha 4. Hamarininay fa nafangaro ireo akora, ary raha ilaina dia averinay ity dingana ity.
Ary vonona hampiasa na hitazona.
Ny kcal dia isaina isaky ny 100 g ny vokatra farany.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny dibera tongolo gasy ve ianao?
Tamin'ity tranga ity dia tsy natsangatsika tamin'ny persily afa-tsy ny persily, fa azonao atao omeo ny mikasika anao manokana manampy rosemary, thyme, basil, oregano, sakamalao na fifangaroan'ny anana Provencal na anana tsara.
Azonao atao ny mampiasa ny dibera hanandrana hena sy trondro, ovy tsotra namboarina na hanome azy io mikasika manokana amin'ny lovia paty tsotra.
Ampiasao ihany koa ho an'ny asio legioma vitsivitsy toy ny asparagus, holatra na legioma natao steamed na amin'ny papillote. Na izany na tsy izany dia tsotra be ny valiny ka azo antoka fa hahagaga anao.
Ny tsiambaratelo hivoahan'ny mpivaro-mofo manaitra tonga lafatra dia ny tokony hahatongavan'izy ireo menaka manitra na amin'ny maripanan'ny efitrano. Raha mangatsiaka izy ireo, dia tsy ho azonao ampifangaroina amin'ny ambiny amin'ireo akora.
Aza misalasala manao io fomba fahandro io amin'ny dibera namboarina izay azonao ampifanarahana amin'ny sakafonao lactose afaka na vegan.
Amin'ny fotoana tazomy ity dibera ity Azonao atao ny misafidy ny hanao horonan-taratasy na varingara na hanao ampahany manokana amin'ny alàlan'ny lasitra sôkôla na gilasy.
Azo tehirizina ao amin'ny faritra mangatsiaka indrindra amin'ny vata fampangatsiahana na ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Fanazavana fanampiny - Papillote legioma sy saosy 5
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Latsaky ny 15 minitra, Saosy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Saosy » Fomba fahandro fototra: dibera tongolo lay
Beatriz Diaz dia hoy izy:
ary ahoana no anaovanao dibera an-trano?
Valiny tamin'i Beatriz Díaz
Tena mora, mikapoka crème tafahoatra. Na izany na tsy izany dia avelako eto ny rohy mankany amin'ny resipeo miaraka amin'ny fomba fanao.